Ireo fironana 5 amin'ny famolavolana tranonkala nanamarika ny 2015 | Famoronana an-tserasera
Fironana 5 sasany amin'ny famolavolana tranonkala nanamarika ny taona 2015
Jesus Arjona Montalvo | | Graphic Design, Famolavolana tranonkala
Ahoana ny fahitana ny tranonkala ary inona ny vaovao naseho tamin'ity taona 2015 ity? Mijery ny sasany amin'ireto isika fironana tranonkala lehibe indrindra amin'ny taona. Inona no mahatonga ny tranokala ho maoderina ary inona no mahatonga azy ho daty? Isan-taona ny fahavelomana dia iray amin'ireo mety indrindra, ny fisafidianana ireo fironana mety ary iza amin'ireo no tsy mety. Amin'ny famaranana ny 2015 dia afaka mamantatra isika izao ny fironana nahomby indrindra tamin'ny 2015, ireo izay mamaritra ny fomban'ny taona ary mampiseho tanjaka ampy hanohizana amin'ny taona vaovao. Ireto misy sasany amin'ireo fironana 5 amin'ny famolavolana tranonkala nanamarika ny taona 2015.
1 Mandroritra lava be.
2 Volavola karatra.
3 Famerenana sary an-tsaina ny famolavolana fisaka.
4 Sarimiaina mahery.
5 Sary mahavariana.
Mandroritra lava be.
Miaraka amin'ny fitetezana finday Efa nihoatra ny birao, 2015 dia nahita famolavolana tranonkala ho an'ny efijery kely kokoa. Tahaka ny fironana maro amin'ity lisitra ity dia nanjary malaza noho izy io fampiasana amin'ny famolavolana, ary ao amin'ny mamaky pejin-tranonkala.
Taloha, natahotra ny mpamorona ny fametrahana atiny ambanin'ny sarom-bilany, izany hoe nanome azy ireo hiteny fa tsy hita tao amin'ny pikantsary voalohany nijery avy tao amin'ny tranonkalany izany, saingy ny fikarohana vaovao dia mampiseho fa tsy mampaninona azy ireo ny manoratsoratra. Androany ny mpamorona sy ny mpampiasa dia manaiky ny sandan'ny fotoana ahafahana mampiasa scrolling: bebe kokoa fahalalahana famoronana, fanatsarana ny fitantarana, ny mahery tokoa ny fifandraisana, ary ny fanatsorana notsorina (raha kely ny tranokala).
Ireo tombony ireo dia misy vidiny voka-dratsy ateraky ny SEO ary ny fotoana famahanana lava kokoa anisan'ny ratsy indrindra. Ny horonan-taratasy lava dia mety indrindra amin'ny tranokala misy fifamoivoizana finday mavesatra na atiny misy haavo havaozina avo lenta, ary tsy dia mahomby ho an'ny tranonkala misy haino aman-jery mavesatra toa ny horonan-tsary.
Fironana iray hafa amin'ny famolavolana tranonkala amin'ity taona 2015 ity izay nalaza tamin'ny fivezivezena finday, dia ny an'ny famolavolana karatra rehefa mampiseho a atiny betsaka a fomba madio y voalamina. Izany no mahatonga azy ireo hifanaraka tsara amin'ny fitetezana atiny samihafa sy samihafa, indrindra ny fampifandraisana amin'ny tranonkala ivelany: mpampiasa intuitively Hain'izy ireo ny manindry ny karatra izay mitondra mankany amin'ilay paositra mifandraika amin'izany.
Famerenana sary an-tsaina ny famolavolana fisaka.
Ny endrika fisaka ankehitriny dia lavitra ny niandohany. Ilay fieritreretana fisaka vaovao sy vaovao misy endrika kokoa, Ryan Allen dia miantso ny 'Flat Design 2.0', manome fotoana bebe kokoa ho an'ny antsipirihany sy ny firavaka. Ity misy ohatra amin'ny tranonkala miaraka amin'ity fironana ity.
ny fihetsik'ireo sary mihetsika nahazo adidy sy andraikitra bebe kokoa tamin'ny 2015, nahatratra mihoatra ny sandan'ny hatsarana, mba hotompoina asa azo ampiharina kokoas, satria manintona ny saina ny hetsika, ny fanentanana dia mety hisy fiantraikany amin'ny ambaratongam-pahefana hita voalohany. Vokatry ny sary afaka manao dokambarotra singa sasany amin'ny hafa, miaraka amin'ny mety hiatrehana ireo lafiny nentim-paharazana, toy ny habe na ny loko.
Ny Animations dia manana fahefana haneho fifandraisana. Mieritrereta vokatra mavitrika iray manodidina ahenao ny varavarankely, izay fianjerany ary avy eo manidina ao anaty menio, ity sary mihetsika ity dia manamarina ny fahombiazan'ny hetsika voalohany, fa asehony koa ny mpampiasa hoe aiza ao amin'ny menio no ahitany ny varavarankely manaraka.
Miaraka amin'ny lazan'ny fampisehoana famaritana avo Tamin'ny 2015, nanomboka nandinika bebe kokoa ny kalitaon'ny kanto amin'ny sary. Betsaka ny tranonkala no miantehitra amin'ny sary manaitra noho ny fampisehoana an-tsary fa tsy ny sary nomerika.
Fenoy sary iray tokana ny afara iray manontolo, izay amoronana tranokala traikefa lalina tokoa afaka misintona ny mpampiasa haingana kokoa, izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny pejy fipetrahana sy fipetrahana.
ohatra/Tranokalan'i Mario Frigerio
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fironana 5 sasany amin'ny famolavolana tranonkala nanamarika ny taona 2015
Fiara tranainy, fantsom-panafody sasany ary marika sasany eo afovoan'ny tanàna lehibe